Amerika afovoany: ny vehivavy, ny haitao, ny fanabeazana. · Global Voices teny Malagasy
Amerika afovoany: ny vehivavy, ny haitao, ny fanabeazana.
Voadika ny 02 Desambra 2008 9:13 GMT
Vakio amin'ny teny Português, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, Français, English
Sarim-panajana handraisana ny Tao
Misy fanentanana iray antsoina hoe Take Back the Tech (Raiso an-tanana ny Haitao) izay mikendry ny hampiasa ny “haitaon'ny fampahafantarana sy ny Fifandraisana (TIC) hampitsaharana ny herisetra Atao Amin'ny Vehivavy,” tahaka ny fanohizana ny ady amin'ny SIDA. Itony no iray amin'ny tetikasa maro manerantany izay mampirisika ny vehivavy tsy hatahotra ny hampiasa ny haitao sy hanatsarana ny andavanandrom-piainany amin'ny alalan'ny fanabeazana [es]. Ankehitriny ary no fotoan-dehibe ho an'ny vehivavy sy ny tovovavy hampiasa ny haitao hanatsarana ny fiainany, indrindra ho an'i Amerika Afovoany.
Voalaza matetika amin'ny lohatenim-baovao ny vehivavy amin'ity faritra ity, saingy tsy any amin'ny antony tian'ny hafa hamakiana ny vaovao izany. Ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy, ny fahantrana faratampony, ny tsy fisian'asa, tsy fahampiankanina, fiakaran'ny taham-pahafatesana, eny famonoam-behivavy aza no hitanao amin'ny gazety. na eo aza izany dia misy ny vehivavy maha-te-hidera manerana ny faritra, izay manao ho laharam-pahamehana ny fanoratana momba ny haitao ary miezaka ny maneho ny fahasamihafana eo amin'ny fisiany ao anatin'ny fiainan'ny vehivavy.
Tsy mba hoe manam-pahaizana momba ny rindrambaiko ihany i Sweetsakura [es] fa mpankasitraka ihany koa ny rindrambaiko afaka, mizara ny tsara ho fantatra sy ny toro-heviny ao amin'ny bolongany miresaka momba ny rindrambaiko, rindrambainga ary ny Ubuntu avy any El Salvador.
Avy any Honduras, Librecaos [es] no mizara ny mahazavadehibe ny rindrambaiko amin'ny fiteny ao an-toerana ary mankalaza fa manana Ubuntu, azo ampiasaina, vita amin'ny teny Miskito, teny teratany ao Amerika Avaratra.
Mahatalanjona ihany koa ny bolongana Vinculación [es] nataon'i Ivonne Aldana avy any Guatemala. Miresaka famoronana vaovao, haiendrika sy haibika (jerena amin'ny efijery) ary soritra, ny vondrona TIC ary ny halehiben'ny fandrosoana vitan'ny manampahaizana.
La Piensa Libre [es], avy any Costa Rica kosa misariaka amin'ny fanoratana ny momba ny haitao, ankoatra ny lohahevitra hafa, hatramin'ny tsy nisarahany tamin'ny fiaraha-monina, ny tontolo iainana ary ny hafa. Mampahatsiahy ny Andro iraisam-pirenena hoamin'ny famongorana ny ady amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy vao notontosaina farany teo izy ka mahatsiahy ny traikefany:
Nandritra ireny andro ireny aho, dia mahatsiahy ny andro nanombohako niasa ary rehefa tsy maintsy nanoratra izay voarakitra tamin'ny kasetin'ny atrikasa izay nitantaranan'ny vehivavy izay nihatra taminy, tsy tanako intsony fa tsy maintsy nihetsi-po aho nandre ny daroka ataon'ny vadiny aminy, nandre azy ireo nitomany fa tsy afa-miasa izy ireo satria “tsy avelan'ny vadiny,” ary ny tena loza dia ny fanaovana azy ireny ho toy ny saribakoly fanaovana firaisam-batana, ary ilaozana avy eo.
Ny hahaizan'ny ehivavy mamaky teny sy ny fanatsarana ny fanabeazana no antoka iray hamahana ny ankamaroan'ny olana mba hanomezana azy ireo ny fampahafantarana ny fahasalamana ara-pananahana hisorohana ny aretina, ohatra. Antenaina fa hitombo isa ny vehivavy mpampiasa ny haitao (teknolojia), mpamokatra (mpandraharaha) ary mpanapa-kevitra politika!